Nhau dzeBhaibheri: Masvingo eJerusarema - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Tarira basa rose riri kuitwa pano. VaIsraeri vakabatikana kuvaka masvingo eJerusarema. Apo Nebhukadnezari akaparadza Jerusarema makore 152 kare, akakoromora masvingo ndokupisa masuo eguta. VaIsraeri havana kuvakazve masvingo pavakatanga kusvika kumusha vachibva Bhabhironi.
Unofunga kuti vanhu vakanzwa sei kugara muno makore ose aya vasina masvingo akapoteredza guta ravo? Havana kunzwa vakakotsekana. Vavengi vavo vaigona kupinda nyore nyore ndokuvadenha. Asi zvino uyu murume Nehemia pakupedzisira anobetsera vanhu kuvakazve masvingo. Unoziva here kuti Nehemia ndiani?
Nehemia muIsraeri anobva muguta reShushani, kunogara Mordhekai naEstere. Nehemia aishanda mumba youmambo yamambo, saka angave ave ari shamwari yakanaka yaMordhekai namambokadzi Estere. Asi Bhaibheri harirevi kuti Nehemia aishandira murume waEstere, Mambo Ahashvheroshi. Aishandira mambo anotevedzera, Mambo Artashasta.
Yeuka, Artashasta ndiMambo akanaka akapa Ezra mari yose yokudzoka nayo Jerusarema kundogadziridza tembere yaJehovha. Asi Ezra haana kuvaka masvingo akapwanywa egutaro. Ngationei kuti kwakaitika sei kuti Nehemia akaita iri basa.
Ave makore 13 chifo chapakapiwa Ezra naArtashasta mari yokugadziridza tembere. Nehemia zvino ndiye mupereki mukuru waMambo Artashasta. Ikoku kunoreva kuti anodirira mambo waini yake, anosimbisira kuti hapana anoedza kuchetura mambo. Ibasa rinokosha kwazvo.
Eya, rimwe zuva Hanani hama yaNehemia navamwe varume vanobva kunyika yaIsraeri vanosvika kuzoshanyira Nehemia. Vanomuudza chinetso chiri kuva navaIsraeri, uye kuti masvingo eJerusarema achakapwanyika zvakadini. Ikoku kunosuruvarisa Nehemia, anonyengetera kuna Jehovha pamsoro pakwo.
Rimwe zuva mambo anocherekedza kuti Nehemia akasuruvara kwazvo, ndokuti: 'Neiko uchinge wakasuruvara zvikuru?' Nehemia anomuudza kuti imhaka yokuti Jerusarema riri mumugariro wakaipa zvikuru uye masvingo akapwanyika. 'Chii chaunoda?' mambo anobvunza.
Nehemia anoti: 'Nditenderei ndiende Jerusarema kuti ndigovakazve masvingo.' Mambo Artashasta anomutsa zvikuru. Anoti Nehemia angaenda, uye anomubetsera kuwana mapango okuvakisa nawo. Nokukurumidza Nehemia asvika Jerusarema, anoudza vanhu nezverongedzero dzake. Vanoda pfungwayo, ndokuti: 'Ngatitangei kuvaka.'
Apo vavengi vavaIsraeri vanoona masvingo achikwira, vanoti: 'Tichaenda ndokuvauraya, ndokumisa basa rokuvaka.' Asi Nehemia anonzwa izvi, saka anopa vashandi minondo namapfumo. Anoti: 'Regai kutya vavengi vedu. Rwirai hama dzenyu, vana venyu, madzimai enyu, nemisha yenyu.'
Vanhu vanoshinga zvikuru. Vanoita kuti mapfumo avo agare akagadzirirwa siku nesikati, uye vanopfuurira kuvaka. Nokudaro mumazuva 52 bedzi masvingo anopera. Zvino vanhu vanganzwa vakakotsekana mukati meguta. Nehemia naEzra vanodzidzisa vanhu mutemo waMwari, uye vanhu vanofara.
Asi zvinhu zvichigere kufanana nezvazvaiveri vaIsraeri vasati vaendeswa senhapwa Bhabhironi. Vanhu vanobatwa ushe namambo wePersia uye vanofanira kumubatira. Asi Jehovha akapikira kuti achatuma mambo mutsva, uye kuti uyu mambo uchaunza rugare kuvanhu. Ndianiko uyu mambo? Achaunza sei rugare kupasi? Anenge makore 450 anopfuura pasina zvimwe zvinonzwiwa pamsoro paikoku. Zvino kunova nokuberekwa kunokosha kworushiye. Asika iyeyo ndiimwe nhau.
Nehemia ganhuro 1 kusvikira ku-6.
VaIsraeri vakanzwa sei sezvo guta ravo reJerusarema rakanga risisina kupoteredzwa nemasvingo?
Basa raNehemia nderei, uye nei richikosha?
Mashoko api anoita kuti Nehemia asafare, uye anoitei?
Mambo Artashasta anoratidza sei mutsa kuna Nehemia?
Nehemia anoronga sei basa rokuvaka zvokuti vavengi vevaIsraeri havagoni kurimisa?
Verenga Nehemia 1:4-6 uye 2:1-20.
Nehemia akakumbira sei kutungamirirwa naJehovha? (Neh. 2:4, 5; VaR. 12:12; 1 Pet. 4:7)
Verenga Nehemia 3:3-5.
Vakuru nevashumiri vanoshumira vangadzidzei pamusiyano wevaTekoi ne“vakuru” vavo? (Neh. 3:5, 27; 2 VaT. 3:7-10; 1 Pet. 5:5)
Verenga Nehemia 4:1-23.
Chii chakaita kuti vaIsraeri varambe vachivaka pasinei zvapo nokushorwa zvakasimba? (Neh. 4:6, 8, 9; Pis. 50:15; Isa. 65:13, 14)
Muenzaniso wevaIsraeri unotikurudzira munzira ipi nhasi?
Verenga Nehemia 6:15.
Chokwadi chokuti masvingo eJerusarema akapedzwa mumwedzi miviri chinoratidzei maererano nesimba rokutenda? (Pis. 56:3, 4; Mat. 17:20; 19:26